Apartments Ivanovic-Isitudiyo esinombono wolwandle - I-Airbnb
Apartments Ivanovic-Isitudiyo esinombono wolwandle
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguVeselin
Omnye wabathengi bethu eBudva!
Le ndlu ikumgama wemizuzu eyi-3 ukusuka elunxwemeni. Ukubonelela ngendawo yokuhlala enomoya otyhefayo kunye neWi-Fi-120Mb yasimahla, Iiflethi i-Ivanović isetwe kwiimitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni lwesanti.
Zonke iindawo zokuhlala zifakwe i-TV yesatellite kwaye zinefenitshala enemibalabala. Ikhitshi elinento yonke liyafumaneka.
Ngokukhethekileyo gxininisa ubutofotofo kunye neendawo ezifanelekileyo, kwaye kufutshane kakhulu nolwandle ..
Nge-Wi-Fi yasimahla kunye nendawo yokupaka esimahla, Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex i-Ivanović zibekwe kwiimitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni lwesanti.
Kukho ivenkile yokutyela enokutya kwasekuhlaleni nokwamazwe ngamazwe ekumgama weemitha eziyi-. Ivenkile yokutya kunye nebhari nayo inokufikelelwa kwiimitha eziyi-250, ngelixa unokufikelela kwimarike yokutya okufreshi xa uhamba ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Veselin
Welcome to Ivan…
Iilwimi: Čeština, English, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Русский, Українська